happy - Synonyms of happy | Antonyms of happy | Definition of happy | Example of happy | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for happy
Top 30 analogous words or synonyms for happy
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၂၀၀၇ ခုနှစ် - Happy Sai Sai Birthday
ကိုယ် နှုတ် စိတ် ယဉ်ကျေးခြင်း ၂၉. ချမ်းမြေ့သာယာသော၊ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော မိသားစု (Happy family) ဖြစ်အောင် မိသားစုဝင်တိုင်းက (fidelity, honesty and loyalty) ကိုယ်စီကျင့်ကြံနေထိုင်ရာ၏။
Indie pop Dinosaur Jr နှင့် Cocteau Twin တို့နှင့်အတူ The Jew and Mary Chain သည် ၁၉၈၀နောက်ပိုင်း shoegaze လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ပုံသွင်းထားသော လွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်သည်။ အခြားအဓိကလှုပ်ရှားမှုမှာ ၁၉၈၀အဆုံးမှ Madchester ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ New Order နှင့် Factory record တို့မှ ပိုင်ဆိုင်သော Manchester မှ night club တစ်ခုဇြစ်သော the Hacienda တစ်ဝိုက်တွင် အခြေစိုက်ခဲ့သည်။ Madchester တီးဝိုင်းများမှာ Happy Mondays နှင့် the Stone Roses တို့ဖြစ်ပြီး acid house dance နှင့် Northern Soul နှင့် Funk တို့ရောစပ်ထားသည်။
Alternative rock ၁၉၈၀ အတောအတွင်းတွင် alternative rock ၏ အခြားပုံစံများသည် အင်္ဂလန်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။ The Jesus and Marry Chain ၏ အသံများသည် Velvet Underground မှ Beach Boys နှင့် Phil Spector နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ post-punk တီးဝိုင်း Jay Division သည် techno နှင့်house ဂီတကို စမ်းသပ်လေ့လာပြီး New Order ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ The Mary Chain, Dinosaur Jr, C86 နှင့် Cocteau Twins သည် ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်း shoegazing လှုပ်ရှားမှုအတွက် ပုံသွင်း လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Shoegazing တီးဝိုင်းများသည် မန်ချက်စတာဖြစ်ရပ်နှင့်အတူ ဆယ်စုနှစ်အဆုံးတွင် ဗြိတိန် ဂီတကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ New Order နှင့် Factory Records ပိုင်ဆိုင်ထားသော မန်ချက်စတာမှ nightclub The Haciendaတွင် မန်ချက်စတာတီးဝိုင်းများဖြစ်သော Happy Mondays နှင့် The Stone Roses တို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
ရှိန်းကျိန့်မြို့ Shenzhen's major tourist attractions include the Chinese Folk Culture Village, the Window of the World, Happy Valley, Splendid China, the Safari Park in Nanshan district, the Dameisha Promenade, Xiaomeisha Beach Resort in Yantian district, Zhongying Jie/Chung Ying Street, Xianhu Lake Botanical Garden, and Minsk World. The city also offers free admission toanumber of public parks including the Lianhuashan Park, Lizhi Park, Zhongshan Park and Wutongshan Park.
ဆီမွန်၊ ဂျီး(န်) ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆီမွန်သည် ဂရိန်းဂျာနှင့်လမ်းခွဲခဲ့ပြီး ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ရစ်ချတ်ဘရုနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှာပင် မင်းသား ကာ့ခ်ဒေါက်ကလပ်စ်နှင့် တွဲဖက်၍ "Spartacus" ဇာတ်ကားတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာ ရုပ်ရှင်လောကနှင့် ဝေးကွာခဲ့ပြီး ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် "All the Way Home" ဇာတ်ကား၌ မိခင်တစ်ယောက်အဖြစ်ပီပြင်သော သရုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်ပရိသတ်ကို ပြန်လည်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဇာတ်ကားများစွာတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ရိုက်ကူးသော "The Happy Ending" ဇာတ်ကားတွင် အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုအတွက် ဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဆီမွန်သည် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ရစ်ချတ်ဘရုနှင့်လမ်းခွဲခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်ကာလများတွင် "North and South", "The Thorn Birds" စသော ရုပ်သံဇာတ်လမ်းများတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အသက်၈၁ နှစ်အရွယ် ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ဖြစ်လဲ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသမီး ဂျီး(န်)ဆီမွန် သည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်တာမော်နီကာ၌ အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သည်။
ပင်လယ်ပျော်ဘီလူး ပင်လယ်ပျော်ဘီလူး, later Happy Giant, Jahre Viking and Knock Nevis, wasaULCC supertanker and the longest ship ever built. She possessed the greatest deadweight tonnage ever recorded. Fully laden, her displacement was , the heaviest ship of any kind, and withadraft of , she was incapable of navigating the English Channel, the Suez Canal or the Panama Canal. Overall, she was generally considered the largest ship ever built, as well as the largest self-propelled man made object ever built. She was last used asafloating storage and offloading unit (FSO) moored off the coast of Qatar in the Persian Gulf at the Al Shaheen Oil Field.